Ọnwa ole: August 2019
Taa na History 18 August 1875 Ụdị ọrụ a mere na Anatolia na Rumelia na ego ole a na-etinye kwa kilomita nke ụzọ a na-emebeghị ka a rịọrọ, ọtụtụ n'ime ha ahapụzikwaghi na njedebe nyocha ahụ. [More ...]
Ndi Batman choro igbanwe uzo netwo uzo ugboala di ugbua, nke na aru oru ma n ’oru ugbo ala Batman-Diyarbak Xr, ebe ihe ruru puku ndi mmadu 15 na-eme njem kwa ubochi, n’onodu ugbo ala. Mgbasa ozi ahụ sitere na akwụkwọ akụkọ Sonsöz maka njem nke Raybus, Batman [More ...]
Ragbọ okporo ígwè Gaziantep, nke e wuru na 1953, bụ otu n'ime ihe kachasị emetụ aka nke akụkọ Gaziantep nke oge a. Tinyere ụlọ ọrụ ọdụ ụgbọ mmiri, e wuru ọtụtụ ihe nkwado maka oge a. Otu n'ime ihe nkwado a [More ...]
Taa na History 17 August 1869 Hirsch, e guzobere ụlọ ọrụ ọhụrụ iji dochie ụlọ ọrụ ahụ. Talabot, bụ onye bụbu onye ọchịchị nke Lombar, họpụtara n'ọnọdụ ya n'ihi mmasị o nyere ya.
Ọdụ ụgbọ elu Derbent Railway, nke a ga-enwe na Mee ma na-atụ anya imeghe na mbido June, bụ na njedebe nke Ọktọba mgbe oge nkwụsị nke ọnwa gasịrị, mgbe General General Directorate nke State Railways Administration na-eme. [More ...]
Obodo ukwu dị na Kocaeli nọgidere na-arụ ọrụ iji mee ka ụmụ amaala bi n'obodo nta dị mfe. N'ebe a, a na-arụ ọrụ na Ngalaba Nkà Mmụta Sayensị na ụzọ ntụgharị na ụzọ ọzọ dị n'etiti Karamürsel district center na Semetler Village. Ogige ntụrụndụ [More ...]
Kedu ihe mere taa n’akụkọ ụzọ ụgbọ oloko? Taa na History 16 AUGUST 1838 Port of Balta Trade Treaty mere ka ndị isi obodo Europe nwee ahia na itinye ego na mpaghara Ottoman. Ndị agha nnupụisi 16 August Hussein bụ ndị agha 1917 nwụrụ n'ihi okwukwe nke 4 [More ...]